Goobaha Ay Saamayso Awoodda Fekerka Maskaxda | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Awoodda fekerku waxay saameyn toos ah ku leedahay maskaxda, jidhka, dareemada, dabeecada iyo natiijooyinka soo baxa. Waxay ku guulaysataa inay sawir u qaadato isku mid ah, iyo kalsooni isku kalsoon ama si wanaagsan, sidoo kale waxay yareysaa masaafooyinka iyo waqtiyada waxayna saamayn xun ama si xun u saameeyaan natiijooyinka hab-fikirka iyo qaabka qoraaga, iyo sidoo kale saameyn ku yeesha caafimaadka bani-aadamka iyo xaaladda nafsiyeed iyo natiijooyin kale oo raacaya habka aadanaha iyo siyaabaha fekerka.
Maskaxda korteha: waa qeyb ka mid maskaxda oo u gaar ah banu’aadanka waana halka uu uga duwan yahay xayawaanada kale. Waana meesha uu ka fakaro banu’aadanka.
Siyaabaha lagu gaari karo awoodda fekerka:
Kalsoonida nafta qofka iyo awoodiisa. Raggu waxa uu ka dhigan yahay waxyaabo weyn oo uu Illaah u muujiyay, taas oo ah maskax iyo fikir. Iftiinka islamka, iftiinka iimaanka iyo xishoodka. Ereygani waa kan ugu weyn ee jiritaanka, erey wanaagsan oo u taagan xaq iyo habkiisa, iyo kuwa kale oo xaasidnimo ah, oo matalaya been abuurka, wayna waydiiyaan, wuxuu yidhi:
Siyabaha lagu garto Awoodda ereyga,
Awoodda waxay ku saleysan tahay erey iyo fikar.
Raac sharciga islamka iyo waxi macquul ah.
Had iyo jeer ku kalsoonow naftaada.
Milkiilaha wuxuu ku riyaaqay xoog, geesinimo iyo kalsooni. Adna ku riyaaq eraygaaga iyo fikerkaaga.
Fikirka sayniska: Waa fekar ku salaysan kormeer iyo cilmi baaris si loo gaaro xalalka dhibaatooyinka iyada oo loo marayo dhowr tallaabo, oo ay ku jiraan:
Kormeer: Halka uu qofku kormeerayo jiritaanka dhibaato ama ifafaale aan awoodi karin inuu xalliyo.
Aqoonso dhibaatada, barashada, soo uruuri macluumaadka ku saabsan, u falanqee una fiirso dhammaan dhinacyada.
3. Diyaarinta khiyaaliga:Waxaan loola jeednaa horumarinta soo jeedinta iyo aqoonsiga siyaabo ku habboon xalinta dhibaatada.
Nafaqo wanaagsan ilmahaaga
Nafaqada saxda ah waa in la siiyaa carruurta, sababtoo ah nafaqada habboon ayaa ah tan ugu saameynta badan ee sirta ilmaha. Nafaqada saxda ah waxay jidhka siisaa dhaqdhaqaaqa iyo tamarta wanaagsan.ilmuhuna wuxuu awoodaa inuu sahamiyo oo uu ururiyo macluumaad ka badan ilmo aad u xanuunsan.
Waa inaad ka taxaddartaa ciyaaraha ilmahaaga, badanaa cayaarahu waxay horumariyaan fikarka ilmaha oo ay dhaqaajiyaan tamarta, waxaana jira noocyo badan oo cayaaro oo ku haboon marxaladaha kala duwan ee da ‘yarta, waxaana si gaar ah loogu talagalay inay horumariyaan awooda ay u leeyihiin in ay diirada saaraan oo ay kor u qaadaan fikradaha, aynaan ka waaban inay ciyaaraan badan oo carruur iyo tamar Intaa ka badan, waa danta uu ku leeyahay horumarinta sirdoonkiisa.
Markaad da ‘yar yihiin, ilmuhu had iyo jeer wuxuu ku jiraa xiliga su’aaha ha ka welwelin jawabta markaad la hadasho, hana Ku celin su’aasha sababtoo ah caruurtu waxay kala soocaan wadada qaladka ah iyo mida saxda ah. Ayagoo firinayo. Dadka ka jawaabaya su’aalahood.hadana jawaabaha haagu waa in ay noqdaan mid lagu kalsoonaa karo ee ilmahaaga iyo hadalkaagu waa inuu noqdo mid mar walbana xiiso leh.
Tilmaamo muhiim ah iga gudoon:
1- Maskaxda waxay u baahan tahay cunto joogto ah oo isku dheelitiran. cuntada waa mid fure u ah shaqa habboon ee joogtada ah ee maskaxda. Noocyada cuntooyinka qaarkood si joogto ah ayaa loogu shaqeeyaa si joogto ahna loo xoojiyaa unugyada maskaxda, taasoo keenaysa xasiloonida iyo hormarinta maskaxda iyo sirdoonka bini aadamka.
3-Maalin kasta maskaxdaada sii jimicsi kala duwan, gaar ahaan marka la eego tirooyinka iyo fekerka sida xallinta calaamadaha dhijitaalka.
4- Iska naso oo sii naftaada wakhti dheeraad ah si aad ku fekerto.
Tags: Goobaha Ay Saamayso Awoodda Fekerka Maskaxda
Next post Ugaadhsade iyo Shimbir - Sheeko Xikmad Leh
Previous post Sidee Loo Hormariyaa Sirdoonka Nolosha?